Mezue 11.00pm Est Hurricane Irma Mmelite, Mgbanwe, ịdọ aka na ntị na elele
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Mezue 11.00pm Est Hurricane Irma Mmelite, Mgbanwe, ịdọ aka na ntị na elele
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa Cuba • Akụkọ Curacao • Akụkọ Haiti • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
Akwụsịla ningdọ Aka ná ntị Oké Ifufe nke US na British Virgin Islands dị ka NWS National Hurricane Center Miami nyere na 11.00 pm EST.
Dị ka National Hurricane Center, Hurricane Irma dị banyere 85 kilomita NNW nke San Juan Puerto Rico na-ahapụ San Juan maka ọtụtụ akụkụ. Ọ dị 315 kilomita ESE nke Grand Turk Islands. Oke ikuku dị ugbu a 185 mph.
A Hurricane Warning dị na for
* Puerto Rico, Vieques, na Culebra
* Dominican Republic site na Cabo Engano ruo ókèala ugwu na Haiti
* Haiti site na mpaghara ugwu na Dominican Republic ruo Le Mole St. Nicholas
* Ndịda ọwụwa anyanwụ Bahamas na ndị Turks na Caicos Islands
Nlele Hurricane na-arụ ọrụ maka
* Cuba site na Matanzas mpaghara ọwụwa anyanwụ ruo mpaghara Guantanamo
* Northwest nke Bahamas
A Tropical Oké Ifufe ịdọ aka ná ntị bụ mmetụta maka…
* Dominican Republic site na ndịda nke Cabo Engano ọdịda anyanwụ ruo na ndịda oke na Haiti
* Haiti site na ndịda Le Mole St. Nicholas gaa Port-Au-Prince
* Mpaghara Cuba nke Guantanamo, Holguin, na Las Tunas
Na 1100 PM EST (0300 UTC), etiti nke Hurricane Irma dị nso na latitude 19.4 North, longitude 66.8 West. Irma na-aga n'akụkụ ọdịda anyanwụ-ọdịda anyanwụ n'akụkụ 16 mph (26 km / h), a na-atụ anya na mmegharị a ga-aga n'ihu maka ụbọchị ole na ole sochirinụ. N'elu amụma ahụ, isi ihe dị oke egwu nke Irma ga-aga n'ihu gafere n'akụkụ ugwu nke Puerto Rico n'abalị a, gafee nso ma ọ bụ naanị ugwu nke ụsọ mmiri nke Hispaniola Tọzdee, wee nọrọ n'akụkụ ndị Turks na Caicos na ndịda ọwụwa anyanwụ Bahamas site na mgbede Tọzdee.
Oke ifufe kwudosiri ike dị nso 185 mph (295 km / h) nwere oke gusts. Irma bu oke ifufe nke 5 na Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Flufọdụ mgbanwe na ike nwere ike ịbụ n'echi ma ọ bụ abụọ na-esote, mana Irma na-ebu amụma na ọ ga-abụ oke ifufe 4 ma ọ bụ 5 ajọ ifufe n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Oké ifufe nke ifufe na-efepụ ihe dị ka kilomita 50 site na etiti ahụ ebe ifufe na-efe ebe udu mmiri na-agbatị ruo kilomita 85.
Atụmatụ kacha nta dị atụmatụ bụ 916 mb (27.05 sentimita).
OZI NA-EBU LLỌ
MGBE AH ST AHOR: Nchikota oke egwu oke mmiri na oke ebili mmiri ga-ebuli ọkwa mmiri AKW LEKWỌ AKWIDKWỌ AKWORKWỌ AKW byKWỌ site na ego ndị a n'ime mpaghara ịdọ aka ná ntị ajọ ifufe dị nso na n'ebe ugwu nke etiti Irma. Na nso ụsọ oké osimiri ahụ, nrịgo ga-esonyere nnukwu ebili mmiri na ebibi.
Turks na Caicos Islands… 15 ruo 20 ftỌwụwa anyanwụ na etiti Bahamas… 15 ruo 20 ft
Ndịda ọwụwa anyanwụ na etiti Bahamas… 15 ruo 20 ft
Northern ugwu nke Dominican Republic… 3 ka 5 ft
Northern n'ụsọ oké osimiri nke Haiti na Gulf of Gonave G 1 ka 3 ft
Northern ụsọ oké osimiri nke Cuba na ịdọ aka ná ntị… 5 ka 10 ft
Ngwakọta nke oke ifufe na-eyi ndụ egwu na ebili mmiri ga-eme ka akọrọ ebe akọrọ na nso n'ụsọ mmiri site na mmiri na-ebili na-asọba site na mmiri. A na-atụ anya na mmiri ahụ ga-erute ọkwa ndị a dị n'elu ma ọ bụrụ na oke elu pụtara n'oge oke ebili…
Ugwu ugwu nke Puerto Rico… 2 to 4 ft
Ndịda ụsọ oké osimiri Puerto Rico… 1 to 3 ft
Mmiri mmiri dị na US na British Virgin Islands ga-eji nke nta nke nta belata n'abalị a na mmalite Tọzdee.
Mmiri kachasị omimi ga-erute n’akụkụ ụsọ oké osimiri na mpaghara ikuku oke osimiri, bụ ebe oke ebili mmiri na oke mbibi ga-eso. Iju mmiri metụtara oke mmiri na-adabere n'oge oge nke oke na oke mmiri, ma nwee ike ịdịgasị iche nke ukwuu. Maka ozi a kapịrị ọnụ na mpaghara gị, biko hụ ngwaahịa ndị ọrụ mpaghara amụma ihu igwe mpaghara gị nyere.
WIND: Ọnọdụ Tropical Storm na Hurricane ga-aga n'ihu na-agbasa n'akụkụ ọdịda anyanwụ n'akụkụ ụfọdụ nke Puerto Rico n'abalị a. A na-atụ anya na ọnọdụ ifufe ga-amalite n'ime mpaghara ịdọ aka ná ntị banyere ajọ ifufe na Dominican Republic na Haiti n'isi ụtụtụ Tọzdee, na ọnọdụ oké ifufe na-ekpo ọkụ na-amalite mgbe e mesịrị n'abalị a. A na-atụ anya na ọnọdụ ifufe ga-amalite na mpaghara ịdọ aka na ntị na ndịda ọwụwa anyanwụ Bahamas na Turks na Caicos Islands site na mbubreyo Tọzdee na ọnọdụ oké mmiri ozuzo site na mbido Thursday. Ọnọdụ ndị a ga-agbasa na Central Bahamas site na abalị Tọzdee ma ọ bụ mmalite Friday.
Ajọ ifufe na oke ifufe ga-ekwe omume n'ime mpaghara nche na Cuba site na Fraịde. A na-atụ anya na ọnọdụ oke ifufe na-amalite n'ime ebe ịdọ aka na ntị na Cuba n'abalị Tọzdee.
RAINFALL: A na-atụ anya ka Irma mepụta mkpokọta mmiri ozuzo ndị a site na Satọde:
Northern Leeward Islands… gbakwunyere 1 na 3 sentimita asatọ. Oké ifufe dị sentimita asatọ ruo iri na abụọ, dịpụrụ sentimita iri abụọ.
Northeast Puerto Rico na British na US Virgin Islands… 6 ka 12 sentimita asatọ, dịpụrụ adịpụ 20 sentimita asatọ. Southwest Puerto Rico… 3 ruo 6 sentimita asatọ, dịpụrụ adịpụ 10 sentimita.
The South Leeward Islands, na Saint Croix… 2 ruo 4 sentimita asatọ.
Ndịda ọwụwa anyanwụ Bahamas, Central Bahamas, na ndị Turks na Caicos… 8 ruo 12 sentimita asatọ, dịpụrụ adịpụ 20 sentimita asatọ.
Northern Dominican Republic na ugwu Haiti… 4 ruo 10 sentimita asatọ, dịpụrụ adịpụ nke sentimita iri na ise.
Eastern na Central Cuba inches 4 ruo 10 sentimita, dịpụrụ adịpụ 15 sentimita asatọ.
Southwest Haiti… 1 ruo 4 sentimita asatọ.
N’ebe niile mmiri ozuzo a nwere ike ibute idei mmiri na apịtị na-eyi ndụ egwu.
SURF: Mmiri mmiri nke Irma mere ga-emetụta ugwu ugwu Leeward, Puerto Rico, Virgin Islands, ndịda ọwụwa anyanwụ Bahamas, ndị Turks na Caicos Islands, ụsọ oké osimiri ugwu nke Dominican
Republic, na akụkụ ụfọdụ nke ndịda ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri United States n'ime ụbọchị ndị na-esote. Mmiri ndị a nwere ike ime ka sọọfụ na-eyi ndụ egwu ma dọwaa ọnọdụ ndị dị ugbu a. Biko kpọtụrụ ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ ihu igwe mpaghara gị.